म त यस महामारीबाट हाललाई उम्किएँ, तर कोरोना अझै फैलिँदो अवस्थामा छ : विष्णु रिमाल – Palika Times
विष्णु रिमाल २२ असोज २०७७, बिहिबार प्रकाशित
२२ असोज, काठमाडौं । कोरोनाको अनुभव व्यक्ति–व्यक्तिमा फरक–फरक छ । कोही लक्षण सहितको संक्रमित हुनुहुन्छ । उहाँहरुको अनुभवले भन्छ– यसले पीडा दिन्छ, गाल्छ । ज्यानै गए अन्तिम अवस्थामा आफन्तहरुले मुख समेत हेर्न पाउँदैनन् । कोही लक्षण बिनाको संक्रमित हुनुहुन्छ । हप्ता/दश दिनमा भाइरस मुक्त ! उहाँहरुको अनुभवमा कोरोना त केही नै हैन रहेछ ! पानी/सानी खायो–खलास् !!!
म पनि कोरोना संक्रमित भएँ । सतर्क रहँदा रहँदै पनि कसरी संक्रमित भएँ? केबल अन्दाजै मात्र छ । लक्षण बिनाको संक्रमित– पहिलो दिन अलिअलि चिन्ता लाग्यो । आफ्नो भन्दा पनि आफ्नो परिबारका सदस्यको । संवेदनशील स्थान भएकोले, आफूले काम गर्ने ठाँउको र होम आइसोलेशनमा रहेकोले छरछिमेकको …। मनमा आयो– अब के होला, अरुहरुले के सोचि रहेका होलान्? कसैलाई केही भइ हाले म कति दोषि ठहरिउँला? आदि ।
मेरो अनुभवले भन्छ– कोरोना केही होइन भन्नु अतिरञ्जना हो । र, कोरोना लागेपछि सिद्दियो भन्नु त झनै उत्तेजनापूर्ण अफवाह हो । तरीका पु-याउँदा यो महामारीको असर अति न्यून हुन्छ । लापर्बाहिमा ज्यानै जान्छ । त्यसैले यस महामारीले पहिलो कुरा, अनुशासनको माग गर्छ । दोश्रो, संक्रमितको उच्च मनोवल र तेश्रो धैर्यताको माग गर्छ ।
मैले किर्तिपुर आयुर्वेदिक अस्पतालका डा. रामआधार यादवले सुझाउनु भएको आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरें । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रबीन्द्र पाण्डेले दिनुभएको सुझावलाई अपनाएँ । हामी खिसिट्युरी गर्न मज्जा मान्छौं । तर पत्याउनु हुन्छ? मैले त त्यही बेसार, कागती, गुर्जो, अदुवा सहितको पानी प्रसस्त पिएँ । राष्ट्रका अति सम्मानित व्यक्तित्वदेखि विभिन्न तह र तप्काका मलाई माया गर्नुहुने आदरणीय शुभेच्छुकहरुले “छिट्टै निको हुन” दिनुभएको शुभकामनालाई आड भरोसाको रुपमा लिएँ । म मा अरु रोग केही थिएन । दुई चिकित्सकहरुले सुझाउनु भएको उपायले मज्जाले काम ग-यो ।
एउटा रमाइलो गरौं? संक्रमणको दोश्रो दिन लेखक/पत्रकार विजय कुमारले फोन गरेर भन्नु भयो– बधाई ब्रदर । मैले सोधें– कुन खुशीमा? उहाँले भन्नु भयो– २/४ दिनमा तपाई ठीक हुनुहुनेछ । त्यसपछि अरु असंक्रमितहरु भ्याक्सिन खाज्दै यताउता भौंतारिने छन् । तपाई आफ्नै शरीरमा पैदाभएको ‘एण्टीबडी’को बलमा ४/६ महीना शानसंग काम गर्न पाउनु हुनेछ । अहिले आराम गर्ने, मेरो किताब– सम्बन्धहरु, पढ्ने ब्रो । मन चङ्गा भयो– कोरोना सल्केर निको भएपछि त काइदाको फाइदा पो हुने रहेछ ।
उपचार खर्च तिर्न नसकेर ह्याम्स अस्पतालमा बन्दी युवक १५ दिनपछि ‘डिस्चार्ज’